ushekhinah uhlela imicimbi ezogqamisa igama lakhe - Ilanga News
Home Izindaba ushekhinah uhlela imicimbi ezogqamisa igama lakhe
SITHI sifihle induku emqubeni ngekusasa laso isihlabani somculo esisaqhubeka nokwenza kahle emculweni.
UShekhinah usanda kumemezela ukuthi i-albhamu yakhe ehlabane ngenqwaba yezindondo nya-kenye isifinyelele esigabeni se-platinum.
Le albhamu esihloko sithi Rose Gold, uShekhinah uhlabane ngayo emcimbini weSouth African Music Awards nyakenye kanti uhlela ukwenza uchungechunge lwemi-cimbi ezindaweni ezahlukene ezweni oluzoqanjwa ngokuthi yiRoseFest.
Le ntandokazi iqale ukugqama emculweni ngesikhathi ingenele umncintiswano we-IdolsSA ngo-2012 kanti isizakhele igama, kwazise ingomunye wabaculi abatha-ndwayo futhi ibeka neNingizimu Afrika ebalazweni lomhlaba.
Useke wanandisa emazweni
ahlukene ezwenikazi i-Afrika naphesheya kwezilwandle.
Ekhuluma neLANGA Lange-Sonto uShekhinah, uthi amaphupho akhe asaqhubeka nokufe-zeka kulo mkhakha.
“Kwakuhlale kuyiphupho lami ukuthi ngibe nomcimbi wami okuzoba yimina ogqamile, kugcwale abantu bezongibuka ngicula.
“Nakuba lokhu sekwenzekile phesheya kwezilwandle kodwa bekungeyona imicimbi yami, be-ngisuke ngimenyiwe, manje ngalona [engiwuhlelayo] yimina ohamba phambili,” kusho uShekhinah mayelana nendumezulu yomcimbi awuhlelayo ozobe ubophele aba-culi noDJ besifazane.
Uthi okwamanje usahlele owaseGoli nowaseThekwini kodwa usazoqhubeka nokuhlela owa-kwamanye amadolobha.
Uthe owaseGoli uzoba ngosuku lokubungaza abesifazane mhla ka-9 kuNcwaba (August) eNasrec Expo Centre, bese owaseThekwini uba sezi-nkundleni zemidlalo eKings Park.
Lo mculi oseke waqo-kwa emcimbini we-European Music Awards, udalule ukuthi kuya-mjabulisa ukuthi emcimbini waseGoli ubophele uhlu lwabaculi noDJ besifa-zane
Lo mculi oseke waqo-kwa emcimbini we-European Music Awards, udalule ukuthi kuya-mjabulisa ukuthi emcimbini waseGoli ubophele uhlu lwabaculi noDJ besifa-zane abasezingeni eliphezulu, phakathi kwabo okubalwa uSho Madjozi, Busiswa, Simmy, Holy Rey, Doo Wap, DJ Zinhle, Moonchild Sanely, Rowlene noMelo B Jones.
EThekwini uthe nakhona uyokujabulela ukunandisa noHoly Rey, Sho Madjozi, Tipcee noDJ Lesoul.
Previous articleIphila okwenyamazane intombi esiyisigqila se-whoonga
Next articleUzokhipha incwadi egeqa amagula ngoyise